Olee otú Jiri WondershareAllMyMusic for Mac
Olee otú Wụnye AllMyMusic
Olee otú Record Online audios
Esi Music Info
Olee otú igwu egwu Kọrọ audios
Olee otú Ọkụ a CD
Isiokwu a bụ banyere otú iji Wondershare AllMyMusic for Mac idekọ online audios. Soro nzọụkwụ na ị ga-ahụ na ọ bụ ezigbo mfe.
Nkebi nke 1: Olee otú Wụnye AllMyMusic for Mac
1). Pịa Free Trial bọtịnụ na ala nke na peeji nke ibudata AllMyMusic for Mac.
2). Abụọ-pịa .dmg faịlụ imeghe installer na mgbe ahụ abụọ-pịa AllMyMusic Installer na-amalite echichi.
3). Nabata Ikikere nkwekọrịta.
4). Pịa Wụnye bọtịnụ rụchaa dum nwụnye.
Part 2: Olee otú Record gụgharia audios
Mepee nchọgharị gị. Ozugbo ị na hụrụ ọdịyo ma ọ bụ video iyi na ị chọrọ, na-aga AllMyMusic for Mac. Na-edekọ ihe kwesịrị na-akpaghị aka ịchọpụta iyi. Pịa "Record" button, na egwú ndetu ga-apụta na-achọpụta na gị track na-ịbụ ndekọ.
Mgbe Ndekọ, echegbula banyere ahapụ iyi page. Nke a ga-emetụta gị ndekọ n'ụzọ ọ bụla. Free-emeghe ma na surf na ndị ọzọ na taabụ ma ọ bụ Windows, ma ọ bụ ọbụna na-emeghe ọhụrụ nchọgharị.
Nkebi nke 3: Esi Music Info
Dị ka e kwuru na Wondershare AllMyMusic for Mac enye ọrụ iji nweta music nkọwa, dị ka na-ese, album na genre.
Ọ bụrụ na ị na-aha ọrụ nke a usoro, AllMyMusic for Mac ga-music Ama n'ihi na ị na-akpaghị aka.
Ọ bụrụ na ị na-eji na-ekpe ikpe version, ị na-ekwe na-music Ama maka 10 songs aka. Ebe a bụ ụzọ na-music Ama na-ekpe ikpe version. Mgbe ị gụsịa Ndekọ audio, ị ga-ahụ track akara ngosi na ala nke ndekọ interface. Bugharịa gị òké na ya na pịa "Music mata" na-nkọwa. I nwekwara ike gaa Library na pịa "Music mata" button. Ọ bụ ya!
Nkebi nke 4: Olee otú Play Kọrọ audios
Ọ bụrụ na i mere na ndekọ ma na-achọ egwu ma ọ bụ nwalee gị ọhụrụ dere track, biko gaa na elu akaekpe nke isi window na pịa "Library" taabụ. Ugbu a gị tracks ga-egosi na ndepụta, nnọọ abụọ pịa ha na-ege ntị.
Part 5: Olee Ọkụ a CD
1. Chọpụta CD burner.
Ị nwere ike ịnweta CD burner si nhọrọ si ngwá ọrụ> Music Toolkit, dị ka kwa ẹwụtde ke screenshot.
2. Ọkụ gị music jidesie a CD
Mgbe abanye CD burner 's window, gaba fanye a ide CD. Ma, e nwere ga-echetara gosiri. Ozugbo na mere, ị nwere ike na-amalite na tinye na ọkacha mmasị gị music tracks si Library. Nanị pịa apa ọkụ mgbe ị na okokụre gị chịkọtara.
Anwale ma pụtara n'elu saịtị:
Wondershare AllMyMusic for Mac A nwalere idekọ seamlessly na 1: 1 àgwà si n'elu 500 redio ụgbọ na online music saịtị, gụnyere ọtụtụ ama gụgharia music saịtị dị ka n'okpuru: